ရန်ကုန်မှာ ရထား တွဲမှောက်၊ (၄)ဦးဒဏ်ရာရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရန်ကုန်မှာ ရထား တွဲမှောက်၊ (၄)ဦးဒဏ်ရာရ
ရန်ကုန်မှာ ရထား တွဲမှောက်၊ (၄)ဦးဒဏ်ရာရ
Posted by ဂျစ်စူ on Sep 1, 2011 in Myanma News |9comments
Photo:The voice weekly’s Facebook
ရွာ့အပြင်မထွက်ဖြစ်တဲ့ ရွာသား၊ရွာသူ အရိုးလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကတော့ ရွာထဲကော ရွာပြင်ကော လမ်းလျှောက်နေတတ်တာဆိုတော့ကား.တော်တော်များများ
ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတာ Update သတင်းလေးတွေတွေ့ မိလျင်တော့ ခုလိုပဲ..မတင်ပဲ မနေနိုင်လို့ ပါ။
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထား နောက်ဆုံးတွဲပြတ်ပြီး တိမ်းမှောက်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ မြို့ပတ်ရထားဟာ ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းဘူတာအလွန် ကမာရွတ်ဘူတာအကြား ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်အနီးတွင် မြန်မာစံတော်ချိန် ၃နာရီဝန်းကျင်က ရထားတိမ်းမှောက် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ လှည်းတန်းဘူတာကထွက်သွားတဲ့ ရထားဟာ မိုင်တိုင် ၅၊၅၆ ရောက်မှာ နောက်ဆုံးတွဲပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီး လမ်းချော်တိမ်းမှောက်သွားတာကြောင့် ယောကျားင်္ ၃ဦးနဲ့ မိန်းမ ၁ဦး ဒဏ်ရာရသွားကာ ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်လိုက်ရတယ်လို့ သွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တွေက ပြောပါတယ်။
ကမာရွတ်ရဲစခန်းကတော့ ရထားတွဲပြန်ကျန်ပြီး လမ်းချော်တိမ်းစောင်းသွားတာသာဖြစ်ပြီး ကျား ၂ မ ၁ ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ခုဖြစ်နေတဲ့နေရာကို မီးရထားဝန်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့ ကွင်းဆင်းလာပြီး ရထားလမ်းကိုအရေးပေါ်ပြင်ဆင်ခိုင်း နေတယ်လို့သိရပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁ ရက် ၂၀၁၁ ညနေ ၅ နာရီ က ရန်ကုန်မြို
့မှ အင်းစိန်သို့ ပြေးဆွဲနေသောမြို့ ပါတ်ရထားတစီး လှည်းတန်းဘူတာအကျော်ရွာမကျောင်း
စစ်ဆေးမှုများ မရှိသည့်အတွက် တိမ်းမှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိခိုက် ဒါဏ်ရာရမှုသတင်းများအတိအကျ
မရရှိသေးပါ။အစိုးရလက်အောက်မြန်မာ့မီးရထားဝန်ဆောင်မှုများမှာလူထုအတွက် အစစအဆင် မပြေမှုများရှိနေပြီးလုံခြုံစိတ်ချရမှုများလည်းမရှိကြောင်း လူထုမှပြောဆိုဝေ ဖန်နေကြကြောင်းကြားသိရပါသည်။ကံကောင်းထောက်မစွာဒါဏ်ရာအနည်းငယ်သာရသော ရထားပေါ်ပါ သံဃာတပါး က ရထားလေး နှစ်စီး ရှိတာ
တစီးမှောက်တယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင်က လမ်းမှားနေမှတော့ ရထားလမ်းချော် တာပေါ့ တကာတို့ ရဲ့ လို့ 
ရန်ကုန်မှာ ရထား တွဲမှောက်၊ အသေအပျောက်မရှိ
ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်-အင်းစိန် မြို့ပတ် ရထားနောက်ဆုံးတွဲသည် ကမာရွတ်ဘူတာနှင့် လှည်းတန်းဘူတာကြားတွင် ပြုတ်ထွက်ကျန်ရစ်ပြီး တိမ်းမှောက်သွားသောကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ ၄ ဦးရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ (Source: မြစ်မခမီဒီယာ)
အင်တာနက်ခဏ၀င်သုံးတုန်းတွေ့ မိတာတွေ ပါ။
အဲတာ..မတွေ့ တာနဲ့ ..
လက်လွန်ပြီး Publish လိုက်ပြီမို့ ..ဘရိတ်အုပ်လို့ ရတော့ဘူး.
ကိုဖောက်ဖော်ရေ………. အဲဒိမှာ ခင်ဗျားလို ပုံမပါဘူးဗျ…။ ကျေးဇူးပဲ…..ပုံတွေအတွက်….
ဒါနဲ့များ မြေအောက်ရထားလမ်းတောင် ဖေါက်ကြဦးမလို့တဲ့ဗျာ။ အပြုသဘောနဲ့ ပြောတာပါ။
ရှိပြီးသား ရထားလမ်းလေးတွေကို အဆင့်အတန်းမီအောင် လုပ်ကြစမ်းပါဗျာ။ မြေအောက်မှာလည်း
သားသားတို့ ရထားမစီးရဲသေးပါဘူးဗျာ။ hahahaha!
စိတ်ပျက်စရာတွေဘဲ ကြားနေရပါလားနော်။တနေ့ မှကိုစိတ်မချမ်းသာဘူး။
စိတ်ပျက်စရာတွေဘဲ ကြားနေရပါလားနော်။တနေ့ မှကိုစိတ်မချမ်းသာဘူး။ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။
၂ ကြောင်းရေး ၁၄ % ရတယ်လား.၊ ငါလဲရေးမှ တွက်ချေကိုက်အောင် ၊ တစ်ဒါဇင်လောက်တော့…၊
လူတွေ အထိအခိုက်မရှိတာ ကံကောင်းတယ်၊
လူသားအားလုံး ခလုပ်မထိ ဆူးမငြိကြပါစေနဲ့………..။
လမ်းတံတား တွေ မီး၇ထားလမ်း မိုင်ဘယ်လောက် ပြီးစီးတယ် တော့ ဝါဒဖြန့် ပါ၇ဲ့ဘယ်လောက်အ၇ည်အသွေးရှိလဲဆိုတာလဲ ကြေညာဖို့ လိုတယ်ထင်ပါတယ်
ဒါမှလဲ စိတ်ချလက်ချစီး၇တော့ မပေါ့ခုတော့ မလွဲသာလို့ သွား၇၇င်တ.လိုက်၇တဲ့ ဘု၇ား
အင်းဘု၇ားရှင်လဲ တ.သံတွေကြား၇တာက များ .နားပူလွန်း လို့ ကိုယ့် ကျင့် စဉ်
တွေတောင်ကျင့် ကြံနိူင်သေး၇ဲ့ လားမသိတော့ပါ